Kaararka iyo Boodhadhka
Ciyaarta guddiga gaarka ah
Alwaaxyo Iyo Caagag
21 Nashqadeeyayaal Japanese ah oo ku sugan DICE CON
Saaxiibada raacaya DICE CON waxay xasuusan karaan in sanadkan aanu soo ururinay qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha madaxa banaan ee Japan oo aanu u samaynay goob bandhig oo loogu talagalay dalka martida ee ciyaarta guddiga. Sannadkan, waxaan ku martiqaadnay 21 naqshadeeyayaasha Jabbaan inay ka qaybqaataan DICE CON, oo aan aasaasnay ​​"dalka martida ciyaarta guddiga R...
Waa maxay asalka ciyaartan la iibiyay isla markii la sii daayay?
by admin 21-10-08
Markaan arkay "Box Girl" markii ugu horeysay, ma aan arki karin in ay tahay ciyaar loox. Inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo naxdin leh oo ku jira ciyaaraha macquulka ah, caynkaas oo kale ah daboolka naxdinta leh ayaa u muuqda markii ugu horeysay adduunka ciyaaraha guddiga. Kadib waxaan ogaaday in wakiilka ciyaartaan uu...
Si qoto dheer u gal dhulka mugdiga ah oo hel siraha halyeeyga-" DHACDOOYINKA: Legends of The Dark "
Inkastoo dib u dhaca DICE CON aanu ahayn wax cusub. Laakiin markii aan arkay bandhig-bixiyeyaal waaweyn oo ku dhawaaqaya alaabtooda cusub midba midka kale, weli aad baan u qalbi jabay. Ciyaarihii ay ahayd in si sharaf leh lagu soo bandhigo bandhigayada ayaa la sii daayay waqtigii loogu talagalay (ilmo tirtiridda). Si kastaba ha ahaatee, markii aan helnay (dheer-a...
Waxaan dib u safray kun sano ka hor oo waxaan noqday dambi baadhe
by admin 21-07-31
Markii aan yaraa, waxaan si gaar ah u jeclaa inaan noqdo Conan, isagoo haysta qorigiisa saacadda oo isku nooc ah, ka dib markii aan toogtay qof kale, waxaan si qabow u qaatay makarafoonka bowtie, ka dib sabab adag, waxaan ku idhi: "Waxaa jira hal run oo keliya.” Markii aan koray, waxaan ka masayray Kogoro A...
Ma noqon doontaa faraska madow ee Abaalmarinta SDJ ee sanadkan?
by admin 21-07-01
Bishii hore, SDJ-ga sannadlaha ah ayaa ku dhawaaqay liiska musharraxiinta. Maalmahan, abaal-marinaha SDJ waxay noqdeen halbowlaha goobada ciyaarta guddiga. Dad badan ayaa qiimeeya heerka ciyaarta si ay u eegaan in ay ku guulaysatay abaal-marinaha ciyaaraha guddoonka ee kala duwan, iyada oo aan la xusin ciyaarta SDJ oo ay si taxadar leh u doorteen ciyaartoy Jarmal ah. Tani waxaad...
Dadka qaar ayaa isku duuban, dadka qaarna miiska way rogaan, laakiin tani wali waa ciyaar guddi oo daacad ah.
2019, Will wuxuu ku dhawaaqay qorshayaal lagu siidaayo "Pamir Peace: Daabacaadda Labaad" ee aaladaha bulshada ee kala duwan. Farriinta is dhex galka, qof ka mid ah shabakadaha ayaa si xushmad leh u waydiiyay bal inuu wax qorshe ah u leeyahay inuu dib u daabaco "shirkadda John". Wuxuu ugu jawaabay, “Maalin. Laakiin waxay qaadan doontaa ugu yaraan laba sano ka dib ...
Ciyaarta Dhabta ah ee Geeks waxay Durba Ku Sameynayaan Ciyaaraha Kharashkooda
Aan u soo noqono April 2020. Waqtigaas, cudurku wuxuu ka bilaabmay dibadda, dadkuna waxay ku xayiran yihiin guriga iyagoo aan haysan wax ay qabtaan. Ciyaartoyda miiskana waa nasasho la'aan. Sida aan wada ognahay, ciyaartoyda miiska waa darbo waaweyn oo sameeya khariidado u gaar ah, sanduuqyada kaydinta iyo xitaa miisaska ciyaarta ee gaarka ah. Iyo...
Aabaha ilmo leh ayaa weli soo saari kara "adduunka ciyaarta looxa"
Weligaa ma aragtay aabbe ilmo xanaanaynaya? Dadka intooda badan maskaxdooda, aabayaashu waxay daryeelaan caruurtooda = "mas'uul". Laakiin Huddersfield, UK, waxaa jira aabbe noocan oo kale ah, oo ku jira habka daryeelka carruurtiisa ma aha oo kaliya mid aad u wanaagsan, iyo habka, sidoo kale, wuxuu naqshadeeyay guddiga g ...
Ciyaarta oo iibisa 17-daqiiqo ayaa sanadkan 50 jirsatay
1971kii, magaalada yar ee Cincinnati, Ohio, waxaa jiray dad badan oo Talyaani ah. Waxaa ka mid ahaa qoyska Robbins. Waxay jecel yihiin inay ciyaaraan ciyaarta turubka ee loo yaqaan Crazy Eight, laakiin waxay inta badan ku murmaan sharciga isbeddelka. Markaa, waxay dib-u-habayn ku sameeyeen xeerkii waxayna u bixiyeen UNO. Marka kaadhka ugu dambeeya uu kuu haro,...
Si fudud baa loo yidhi
Markaad eegto safafka ciyaaraha looxa ee ku yaal raafka ciyaarta, miyaad xasuusan kartaa ciyaarta daboolkeedu yahay mid la jecel yahay marka hore la eego? Ama ciyaarta farsamadeedu ay tahay mid madadaalo leh, laakiin waxay u muuqataa wax yar oo cabsi leh. Ilaa xad, daboolka ciyaarta ayaa go'aamiya in ciyaartu wanaagsan tahay iyo in kale. Iyada oo la wanaajinayo dadka '...
Habka Kobaca Kooxda Gabdhaha ee Nakhshadeynta Ciyaarta Guddiga Kuuriya
Warshadaha sanamyada ayaa si ku filan ugu bislaaday Kuuriyada Koonfureed. Sida maahmaahdu tiraahdo, Kuuriya waxay leedahay saddex hanti: sanam, dukaameysi, cunto. Sanamyada qurxoon waa isku mid, laakiin waxaa jira sanamyo xiiso leh oo yar. Dhawaan, Warshadaha naqshadeynta garaafyada ee jiilka da'da yar ee Kuuriyada Koonfureed, waxaa jira ...
Soo saaraha Kylin waa soo saaraha ciyaarta looxa oo aqbala jumlada iyo habaynta
by admin 20-10-29
Soo saaraha Kylin wuxuu leeyahay adeegga ugu wanaagsan ee aan adiga kuu habeyn karno, naqshad kasta oo aan ku bixinno qiimaha warshadda. Waxaan aaminsanahay in xiriirka guusha leh ee ka dhexeeya soosaarayaasha iyo macaamiisha ay ku saleysan tahay isku halaynta iyo daacadnimada. Ku-dhaqanka adag ee mabda'aani wuxuu noo ogolaanayaa inaan si joogto ah u kulano oo aan dhaafno o...
Talooyin - Alaabooyinka Kulul - Khariidadda goobta
Playmat Printed Custom, Laadhuu khaas ah, Kaadhadhka Xaqiijinta ee ku jira Haysta Alwaax, Kaararka Ciyaarta Gaarka ah, Gacmaha kaadhka, Ciyaarta guddiga Mats-ka dharka,